A na-etinye Igwefoto Igwe Na-ahụ Maka Ahụike - OMG Solutions
Igwefoto ahụ na-eyi bụ ihe eji eyi n’ahụ iji dee ihe omume, ndị ọrụ mmanye iwu na-ejikarị ha. Enweela anya ọzọ na - ebugharị, na ngalaba ndị uwe ojii ebe etinyere ya ma jiri ya na-edozi nsogbu mpụ kwa ụbọchị. Enweela nnukwu nsonaazụ na ngalaba ndị uwe ojii bụ ndị hụrụla ọdịda nke ojiji ndị ọrụ ha na ụmụ amaala belata ebubo na-ezighi ezi nke ndị uwe ojii. A na-atụle ugbu a igwefoto ahụ nwere maka mmejuputa ya na ngalaba ndị ọzọ. Ahụike ahụike ekpebiela itinye ụdị nka na ụzụ iji nyere ndị ọrụ ahụike aka ịrụ ọrụ ha nke ọma. Na UK, ụlọ ọrụ nlekọta ahụ ike amatala ihe omume ahụ ma etinye ya na ya.
Na UK enweala ime ihe ike n’ụlọ ọgwụ site na 28%, enwetara nsonaazụ ndị a mgbe emere ọmụmụ ihe ọnwa atọ n’ụlọ ọgwụ Queen Elizabeth dị na Birmingham, England. Ndị ọrụ nchekwa n'ụlọ ọgwụ ahụ yi kamera ahụ nke RS. Site na iji igwefoto a na ahụ ha, ha na-enwe ike ịdekọ iyi egwu ọ bụla nke mkparị ma ọ bụ na-emegide onwe ha. Omume niile na-eyi egwu ma ọ bụ ọbụna enweghị ezi uche, ha na-ejide igwe eserese ụdị agbụrụ na ọnụ niile. Enweela ọtụtụ ihe mere n'oge a nke igwefoto ahụ nyeere aka. Enwere ikpe nke nwanyị ọrịa jụrụ ịhapụ ngalaba ahụike mberede chọrọ ọgwụ ọgwụ, ọ gara n'ihu na-ebo ndị ọrụ ebubo na ha na-emetụ ya aka n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Nke a mere ka nchekwa dị gburugburu jiri igwefoto ahụ ha wee gwa ya na a na-edekọ ya, nyocha a bụrịrị nnukwu ndị ọrụ nchekwa. Nsonaazụ gosipụtara na igwefoto ahụ na-enyere aka n'ozuzu ya.
N’ụlọ ọgwụ Hillington ụlọ ọrụ NHS dị na UK, ụlọ ọrụ ahụike amalitela iji usoro igwefoto ahụ na-eme ahụ. Ndị ọrụ nchekwa ahụ na-eburu ha ngwaọrụ dịịrị maka ịgwa ndị ọrịa a ga-edekọ ha ma ọ bụrụ na ha emejọ ma ọ bụ mee ihe n'ụzọ adịghị mma. N'ihi mmata a n’etiti ndị mmadụ, enwere mbelata nke ime ihe ike. A hụrụ igwefoto ahụ ka ha nwee ike ịchọpụta ụfọdụ ntụpọ na CCTV onyunyo nke edobere ka ihe kamera ahụ nwere ike ịhụ nso. Igwefoto ndị ahụ wee nwee ike ịmata ndị ọrụ rịọrọ ka abaara ha n'ime ngalaba. N'ime ụlọ ọgwụ Cardiff na wales, enwere ọhụụ nke iji kamera ahụ. Ndị ọrụ nchekwa ebe a na-atụgharị igwefoto iji belata ọnọdụ ime ihe ike, n'ụlọ ọgwụ mahadum na wale ozugbo mmadụ hụsịrị ịkpa agwa na ime ihe na-ekwesịghị ekwesị, a na-agwa ya naanị na ọ na-edekọ ha. Vidiyo ọ bụla edere banyere onye dị otú ahụ nwere ike iji ya megide ha, n'ụlọ ikpe nwere usoro ndị a na-eme, mpụ abatala n'ụlọ ọgwụ.
Ihe mgbochi nke sistemụ ahụ
Igwefoto ahụ nwere ọtụtụ uru mana enwere ikike ụfọdụ nke sistemụ na-esite na nke ahụ adịghị mfe ileghara anya. Etu ndị a bụ:
Ihe nlere igwefoto: Ọ bụ ihe ama ama na igwefoto anaghị eso anya onye ọrụ ahụ, naanị ihe ha nwere ike ịhụ bụ nke edobere ha n'ihu ihe ọ bụla na-ewu ubi ahụ. Nwere ike idobe ya na obi ma mgbe ị jiri ike mee ka nlele igwefoto gbanwere wee gbadata, n'ikpeazụ mgbe ịdebere ihe osise ahụ, ịnweghị ike ịhụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị n'ụkwụ ndị ahụ metụtara. Maka nke a, a na-adụkarị ọdụ ka ị nweta ụdị okpu ahụ ma ọ bụ ndị nwere ike ịgụnye iko.
Nleghari nlele: Ihe mgbochi ọzọ kwesịrị ịmara bụ na anụ ahụ na-egbochi ihe a na-elele ruo n’ókè ụfọdụ, n’ikpeazụ ị ga-ahụ naanị ihu ihu. Ya mere na enweghi ike inwe elele ogo 360 maka gburugburu gi. Enwere ike ịkọwa ebe a na-enweghị ike iji ya kwụọ ụgwọ dị ka ntụpọ kpuru ìsì, ihe omume na mpaghara dị ka nke a agaghị ahụ na vidiyo ahụ.
Na-agbanye: maka ọtụtụ kamera ahụ, ka ịdekọ ihe ịchọrọ iji gbanye ya. Nke a pụtara na ikwesiri igbanye bọtịnụ ka ịdekọ ihe omume, ihe a mere bụ nsogbu ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị uwe ojii enweghị igwefoto ha na ihe dị mkpa ịchọrọ idekọ. Enwere ụfọdụ sistemụ akpaghị aka taa na-agbanye na nzaghachi otu ọrụ.
Enweghi ike dochie nyocha nke ọma: agbanyeghị mkpa igwefoto dịruru na ọrụ ọ nwere ike ịrụ na ikpe, a ka nwere ezigbo mkpa maka nyocha nke ọma. A ga-eme nyocha ahụ mgbe ọbụlagodi na inye usoro nke ihe nkiri n'ihi na n'ọgbọ a, ọ ga - ekwe omume dezie vidiyo na ịgbanwe ọnọdụ.
Ekwesịrị ịzigharị ihe niile metụtara igwefoto ndị ahụ na-eme ka ọ dị mma, ọ dị mkpa ka ha gosipụta etu ha si arụ ọrụ na igosipụta usoro nwere ike ịdabere na nyocha.
Igwefoto ahụ na-eyi: ekwesịrị ịhapụ ha n'ụlọ ọrụ nlekọta ahụike
Isi okwu mbụ na-apụta mgbe a na-ekwu maka nke a, bụ na ụlọ ọgwụ kwesịrị ịbụ otu ebe ebe nzuzo nke ndị ọrịa na ndị ọbịa dị mkpa n'ịtụle ọnọdụ iwu na usoro nchịkwa ahụike chọrọ. Enwere iwu siri ike nke na-achịkwa iji na ịhapụ ozi banyere ụfọdụ onye ọrịa nwere mkpa pụrụ iche, ọtụtụ n'ime ọgwụgwọ ha na-amalite na ngalaba mberede, nke a na-abụ otu mpaghara ebe ị ga-ahụ ọtụtụ nchekwa na igwefoto ahụ. Ndị ọzọ na-eme iwu na-enwekarị mgbatị ahụ na ịgba ajụjụ ọnụ nke a na-eme n'ụlọ ọrụ ahụike, site n'aka ndị ọrụ mmanye iwu kachasị n'okwu ndị dị ka: mwakpo nwoke na nwanyị, ime ihe ike ụlọ na mmetọ ụmụaka, ndị a bụ ikpe nwere ike emegide iwu ụlọ ọgwụ na imebi iwu. nzuzo maka ụfọdụ ndị ọrịa nọ gburugburu.
Courtlọ ikpe, States na-ekwu n'ezie n'okwu a
N'oge ndị na-adịbeghị anya, enweela ikpe ụfọdụ n'oge na-adịbeghị anya nke nọ na mbipụta ndekọ karịsịa na ojiji nke mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, na afọ 2013 Connecticut na akwa ọhụụ mere foto nke ndị ọrịa site n'aka ndị ọrụ mberede nke nwere ike ịbụ ọkụ ma ọ bụ ndị uwe ojii na mpụ. Dabere na iwu ọhụrụ ahụ, ọ bụ naanị ndị ikike nyere ikike ka ha see foto ndị a. Ihe a niile malitere na 2009 mgbe Cathy Bates, onye nwụrụ n'ihe ọghọm ụgbọ ala. N'oge emume a, onye nzaghachi mbu zigara foto ahụ na nkọwa ya n'ịntanetị na Facebook tupu a gwa ezinụlọ ya. Steeti abụọ a machibidokwara iketa foto nke ndị ọrịa na-enweghị nkwenye ha. Na 2013, Mịnịsta na-ahụ maka enyemaka Maryland nyere ndetu nke uche na-ejikọ eserese nke onye ọrịa dị ka mmebi iwu nke ịkwụ ụgwọ mkpuchi arụmọrụ na mmezi ngosipụta (HIPAA) nke a metụtakwara iwu mkpuchi ahụike steeti N'ime ihe o dere, o dere etu esi were foto nke ndị ọrịa ndị amata na -ekwupụta “ozi ahụ ike ịmata onye ọ bụla” n'okpuru HIPAA, mwepụta ya na nke ọ bụla ga-abụ ihe megidere ma ndị omekome na ndị obodo nwere ntaramahụhụ site n'iwu. Nke a bụ ma ọ bụrụ na enwetara nkwenye ahụ enwetaghị tupu emee nke a, mgbe ahụ, enwere ike ịdọrọ ikpe megide onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị otú ahụ.
O kwere omume na otu ụlọ ọrụ ahụike nwere usoro na usoro siri ike na-eduzi ndị ọrụ na akụrụngwa nke ya. Ọ bụghị n'ezie nnukwu ihe ma ọ bụrụ na ha nwere iwu na ụkpụrụ ndị a, atumatu ndị a bụ ịduzi omume yana iji hụ na ụkpụrụ omume. Ọ gwụla ma ndị mmanye iwu obodo na ndị ọzọ na-anabata asụsụ nkwado yiri nke ahụ na amụma ha. a ka nwere ikike dị elu maka imebi ihe mgbe enwere ndị ọzọ na-eji igwefoto ahụ, na mkpokọta, ndị ọzọ ga-apụta mmadụ na-enweghị ọzụzụ ọ bụla ma enwetaghị ngwaọrụ ahụ ha mana n'ụzọ ụfọdụ ohere inweta otu.
Esemokwu dị n’etiti ụlọ ọgwụ na ndị mmanye iwu
N'ihi ọdịdị dị oke ukwuu na iji ọtụtụ elektrọn eletrik na ikike ndekọ ha, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ahụike emepeela ọtụtụ usoro iwu na usoro na-akọwa ndị nabatara na ojiji kwesịrị ekwesị nke ngwaọrụ ndekọ a na ihe onwunwe ha, akụ a nwere ike ịpụta ndị ọrịa na ọbụna ndị ọbịa ahụ. Ọ bụ ezie na imirikiti usoro iwu ndị a dị mfe nghọta ma ha achọghị echiche ọ bụla ma ọ bụ lelee anya. Somefọdụ ndokwa nwere ike bụrụ agha megide ojiji a ga-ebu amụma na sistemụ igwefoto ahụ na-eyi mmebi iwu ga-ezute. Ihe atụ nke a bụ; ọ bụrụ na mmadụ ga-achọ ka eserese ma ọ bụ dekọọ onye ọrịa, ọ ga-achọ nkwenye okwu ọnụ ma ọ bụ nkwenye n'aka onye ahụ tupu ime ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ndị ọrụ mmanye iwu, enwere nsogbu nke onye ga-anara ikike ahụ ikekwe ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ ụlọ ọgwụ. Ihe omuma atu nke iweputara ndia ihe di mgbagwoju anya ma sie ike ịza ajuju bu nyocha banyere mpu nmekorita nke nwanyi ma obu agha ajuju nke ime ulo ihe mberede
Nzuzo 6123 1 Echiche Taa